Chrome 95 inonongedzera pachena kune FTP | Linux Vakapindwa muropa
Pablinux | 21/10/2021 14:26 | General
Zvinotaridza kuti Google iri kufunga nezveramangwana rewebhu. Mukuvhurwa kutsva kwebrowser yako, senge iyo v94 isingasviki mwedzi wapfuura, inowedzera maficha evagadziri. Mushandisi wekupedzisira haakwanise kutora mukana wezvinhu izvi zvitsva vega, asi ivo vanozovandudza ruzivo rwavo kana vagadziri vatanga kushandisa maAPI. Ichi Chipiri, Google yakakanda Chrome 95, uye, zvakare zvakare, kune akati wandei matsva mune izvi.
Asi zvinhu hazvisi zvinowedzerwa nguva dzese. Dzimwe nguva unofanirwa kutora nhanho kudzokera kumberi nesimba rakawanda, uye mune software izvo zvinowanzoreva kuti kutsigirwa kwechimwe chinhu kusiiwa. Imwe nguva yapfuura ivo vaive vatanga kusiya iyo FTP protocol kumashure, uye iine Chrome 95 yekupedzisira nhanho yakatorwa; kupera kwerutsigiro kwapera. Pazasi iwe une nyora nedzimwe nhau Ivo vauya pamwechete pamwe neshanduro ye95th yeGoogle browser.
Chii chitsva mu Chrome 95
Tsigiro yeFTP yakabviswa zvachose. Vakatanga kuidonhedza mu Chrome 88, uye ikozvino haichawanikwe.
Itsva URLPattern API iyo inopa inoshanda sisitimu rutsigiro ye URLs dzinoenderana yakapihwa pateni.
Nyowani EyeDropper API yekugadzira yakasarudzika vatori vemavara.
Kuedza kwakaitwa kudzikisira yakafumurwa HTTP mushandisi mumiririri ruzivo tambo kudzora iyo ingangoita browser yekutsika yemawebhusaiti.
Yekuwana kutonga kune iyo faira system kuwana API. Izvi zvinogona kupa kuita kuri nani, pamwe nematare matsva ekushandisa.
WebAssembly yekuchengetedzwa kwekubhadharwa kwekuchengetedzwa uye kunze kwekubata kwakasimudzirwa kubva kune kwayo kwekare humbowo hwekutanga.
Chrome 95 ikozvino iripo kubva ku website yepamutemo. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha installers iyo ichawedzerawo repamutemo repamutemo rekuvandudzwa mune ramangwana. PaArch Linux yakavakirwa kugovera inowanikwa muAUR se google Chrome.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chrome 95 inonyatso kutaura zvakanaka kuFTP uye inowedzera zvitsva zvevagadziri
Eduardo Avila akadaro
Zvakanaka kuziva. Kunyangwe ini ndakanga ndisingazive kuti sei chrome yakashandisa iyo FTP protocol. Iye zvino ndine kupokana kwakawanda kupfuura nakare kose. Zvinoita sei kuti chrome browser ishandise FTP uye unoshandisei?